စာစုတို | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 37
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – လူထုဒေါ်အမာနှင့် တခဏတာ တွေ့ဆုံခဲ့ရာဝယ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄ ၁၉၉၉ နှစ်အတွင်းက မိမိဟာ တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတုိုက်မှာ သီတင်းသုံးနေစဉ် လူထုဒေါ်အမာကုို မန္တလေးလူထုတုိုက်မှာ ပထမဦးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အလွန်မြန်မာဆန်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက မထူးဆန်းလှပေမယ့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ သူ့အသွင်အပြင်က ပညာရှိမြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ ဟန်အမူအယာကုို ပေါ်လွင်စေတယ်လုို့ ထင်မိတယ်။ စာပေမှတဆင့် လေးစားခဲ့ရသူတယောက်ကုို တုိုက်ရုိုက်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့် ရလုိုက်တဲ့အခါမှာ ကြည်နူးမှုဖြင့် ပုိုမုိုလေးစားခဲ့ရတယ်ဆုိုတာကုို ရုိုးရုိုးသားသား ဝန်ခံချင်ပါတယ်။ ဆရာမောင်ထွန်းသူ ဘာသာပြန်တဲ့ အရက်အန္တရာယ်ကုို မီးမောင်းထုိုးပြထားတဲ့ ဝတ္ထုတုိုတပုဒ်နဲ့ လူထုဦးလှနဲ့ လူထုဒေါ်အမာတုို့ ရေးသားပြုစုတဲ့ “ဆေးလိပ်နှင့်လူသား” စာအုပ်ထဲမှ ဆောင်းပါးတချို့ကုို ထုတ်နှုတ်ပြီး စာအုပ်ခပ်သေးသေး...
အဲဒိုဗေဒါ – မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် မင်းသားသုံးပါး
အဲဒိုဗေဒါ – မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် မင်းသားသုံးပါး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၄ ကျနော်တို့မြန်မာတွေက အလွန်အချော့ကြိုက်သည်။ တနည်းအားဖြင့် အမြှောက် အလွန်ကြိုက်သည်။ သက်ကြီးပိုင်းတယောက်တွေ့လျှင် အန်ကယ်၊ ဦးလေးခေါ်လျှင် မကြိုက်။ အကိုကြီးဟု ချော့ခေါ်မှ ကြိုက်သည်။ နဲနဲပိုအသက်ကြီးလျင် အဘဟု မြှောက်ခေါ်မှ ကြိုက်သည်။ မြန်မာပြည်အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်းပြောလျှင် အမျိုးသားသစ္စာဖောက်၊ ပြည်ဖျက်၊ မျိုးမစစ်ဟုမြင်ကြသည်။ “ဆီကိုရေချိုး.. ဆေးရိုးမီး လှုံ .. ဆေးရိုးမီးလှုံဟု” ဆိုပြလျှင် အလွန်သဘောကျကြသည်။ ဘေးဘီက လူတွေကို ပတ်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီး လက်မထောင်ပြတတ်ကြသည်။ တကယ်ကျတော့ ဆီကို ရေချိုးဖို့နေနေသာသာ မြန်မာလူထုရဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော စားအုန်းဆီ အညံ့စားများကိုသာ စားသုံးနေကြရတာကို အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးရိုးမီးလှုံဖို့နေနေသာသာ...
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) – မန္တ​လေးရယ်​ … ဆောင်းပြန်​​ခေါ်​ပေးပါ
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) – မန္တ​လေးရယ်​ … ဆောင်းပြန်​​ခေါ်​ပေးပါ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၄ photo : Christopher Martin Photography မြူနှင်းတို့ တ​ဝေ့​ဝေ့ တဝဲဝဲ ကျဆင်းချိန်​တွင်​​ မြောက်​​လေချို​အေး​သည်​ ဝန်း​ဝေ့တိုက်​ခတ်​လျှက်​ရှိသည်​။ နှင်း​တွေက​တော့ ​ဝေမှိုင်းကျ​နေဆဲ ပါ။ ယဲ့ယဲ့က​လေးကျဆင်း​နေ​သော​ နေ​ရောင်​ခြည်​က ပိတ်​ဖုံးနေ​သောနှင်းထုကို အစွမ်းကုန်​ထိုး​ဖောက်​​နေဆဲ။ ​တောင်​ခိုးတ​ဝေ​ဝေ မြူ​ခြေက တစိုင်းစိုင်းနှင့်​ မန္တ​လေး​တောင်​ကြီးမှာ လွမ်းစရာမြင်​ကွင်းကို ဖန်​တီး​နေပါသည်​။ ဝန်းကျင်​တခိုကို သဲသဲကွဲကွဲ ပီပီပြင်​ပြင်​ မမြင်​ရ​ပေ။ မန္တ​လေး​ဟေမန်​​ဆောင်း၏ မှုန်​ပျပျ ပန်းချီကားမှာ ရှု့မငြီးဖွယ်​​ကောင်းလှပါဘိ….။ ဒါ ဟိုတစ်​ချိန်​တုန်းက မန္တ​လေးရဲ့ ​ဆောင်းရာသီ​ပေါ့။ အခုမန္တ​လေးက​တော့ နိုဝင်​ဘာလသာ​ရောက်​လာသည်​။ ဆောင်းက ဘယ်​ဆီမှာ မသိ​ပေ။ ဟိုတုန်းက ရပ်​ကွက်​ဘုရားပွဲဆိုရင်​ မီးဖိုပြီး...
ညိုထက်ညို – ငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော် ဟိုးငယ်ငယ် လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက မြန်မာကလေး အတော်များများရဲ့ထုံးစံ ဘောလုံး စ၀ါသနာပါခဲ့ပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်း လမ်းမကြီးရဲ့ အာဖရိကက အမည်းရောင်ကျောက်ပြားကြီးတွေခင်းထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ ကျွန်တော် ကော်ဘော လုံး၏ကလေးနဲ့ ကျွန်တော့် ကလေးဘ၀ ကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက မဆလခေတ်။ မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းက အဲဒီအချိန်မှာ “ဒူ” နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးပရိသတ်တွေ အဓိကထား အားပေးကြရတာ ပြည်နယ် နှင့်တိုင်း ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေ။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်တိုင်း ပရိသတ်…. ယဉ်ထွေး၊ ၀င်းအောင်၊ လှမိုး၊ အောင်ထွန်းထွန်း၊ မြင့်ဇော်၊ စောလွင်၊ နောက် မျိုးလှိုင်ဝင်း။ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းအသီးသီးက...
လင်းထင် – ငရဲလမ်းလိုက်မှ ဘာ မျှော်လင့်ရဦးမလဲ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၄ အလယ်ခေတ် အီတာလျံ ကဗျာဆရာ ဒန်ထေရဲ့ ဘုံခန်း ငရဲခန်းကို ဖွဲ့တဲ့ မဟာ အဲပစ် ကဗျာမယ် (၃) ပိုင်းပါတယ်။ အင်ဖာနို ဆိုတာ ငရဲခန်းပေါ့။ နောက် ပါ့ဂတ်ထရီ… ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ ထိုက်တန်အောင် ၀ိညာဉ်တော် သန့်စင်ရာ ကြားကာလပေါ့၊ ဘုံပေါ့။ (အင်း ဒါတွေဟာ ကာလလား၊ ဒေသလား အတော်ခွဲခွဲခြားခြား ပြောရခက်ပ၊ နှိုင်းရဆရာ အိုင်းစတိုင်းကတော့ အချိန် တိုင်းမ် ဆိုတာ စပေ့စ် ရှိမှ ယှဉ်တွဲဖြစ်ထွန်းပြီး ကိန်းသေလည်း မဟုတ် ပြောင်းနိုင်တဲ့ (၄) ခုမြောက် ဒိုင်မေးရှင်းတဲ့၊ ထားတော့။)...
မောင်ရင်ငတေ – သူတို့ပြောလာတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ်
မောင်ရင်ငတေ – သူတို့ပြောလာတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄ အခုရက်ပိုင်း လူပြောများလာတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်း အကြောင်းလေးပါ၊ မူရင်း အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကို ရေးခဲ့သူကတော့ ပြင်သစ်လူမျိုး ပါရီမြို့သား Eugène Edine Pottier (၁၈၁၆-၁၈၈၇) ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီခေတ်က ပြင်သစ်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံဒေသမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ (စုပေါင်းပြီး စကားပြောကြ စာဖတ်ကြ သီချင်းဆိုကြ အတွေးအခေါ်တွေ ဖလှယ်ကြတဲ့) Goguette ခေါ် အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်းဖြစ်သူ ကဗျာဆရာတဦးလည်းဖြစ်သူ အျူဂျန် ပိုတီယေက ဒီသီချင်း L’Internationale ကို ပါရီကွန်မြူန်း အပြီး ပါရီမြို့ကနေ တိမ်းရှောင်နေရစဉ်မှာ ရေသားခဲ့တာပါတဲ့၊ ၁၈၇၁ ခုနှစ် (French Revolution) ပါရီကွန်မြူန်း...
ဆောင်းလူ – ငါ မြစ်ဖျားခံရာ နံနက်ခင်းတခု (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄ လှသည် … နံနက်ခင်းတခု…။ သို့သော် … ပူလွန်း စပ်လွန်းသော ဆောင်း၏ မြစ်ဖျားခံရာ နံနက်ခင်းတခု။ အကျဉ်းတန်သည်ဟု ထင်ပစ်လိုက်မည်ဆိုသော အတ္တတို့သည် တဖွားဖွား …။ ခက်လှပြီ …။ လမ်းတို့သည် ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် ….။ ပန်းတို့သည် ဖူးဖူးမောက်မောက် …။ လက်ထဲက၀တ္ထုစာမျက်နှာတို့တွင် တိကျသည့် အက္ခရာမရှိ။ တိကျသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ရာမရှိ။ တိကျသည့် …… ကျီးကြည့် ကြောင်ကြည့်နှင့် ဘ၀သည် ကိုယ့်ရှေ့က အက္ခရာကိုပင် ကိုယ်မမှတ်မိ။ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် .. ဒါဟာ ဟန်ဆောင်မှုတခုလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ နှလုံးသားတခုကို အပေါင်ဆုံးနေခဲ့ရသည့်...
ဆောင်းလူ – လက်အတွက် ကဗျာတပုဒ်၊ စာတပုဒ်
ဆောင်းလူ – လက်အတွက် ကဗျာတပုဒ်၊ စာတပုဒ် နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ ဒီလက်တွေပဲလေ လိုရာဖမ်းဆုပ်ဖို့ အသင့် မလိုရာကို ဆန့်ထုတ်ဖို့ အသင့် ..။ လက်တွေမှာ အားတွေရှိတယ် လက်တွေမှာ တရားတွေရှိတယ် …။ ဒီလက်တွေပဲလေ .. မွေးလာ ခဏမှာ ဖျတ်ဖျတ်ကိုလူးလို့ …။ ဒီလက်တွေပဲလေ … သွားရာလမ်းမှာ ရင့်ကျင့်မှုတွေပြည့်လို့ …။ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄ ++++++++ သူ၏ လက် …။ သူမ၏ လက် …။ ထိုသူတို့၏ လက် ….။ ထိုသူများတို့၏ လက် …။ လက်အမျိုးမျိုး၊ လက်အထွေထွေတို့သည် …. ပုသည်လည်း ရှိ၏။...
ဆောင်းဝင်းလတ် – ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းတနေရာ
ဆောင်းဝင်းလတ် – ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းတနေရာ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၄ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကဖြစ်သည်။ ညီတယောက်သဖွယ် ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော စာနယ်ဇင်းသမား လူငယ်တဦးက မဂ္ဂဇင်းတစောင်ကို လစဉ်ထုတ် ဝေဖို့ စတင်ပြီး စီစဉ်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ကျွန်တော့်အား “အထက်အညာဒေသဘက်ကို အကိုနဲ့အတူ ကျွန်တော် ခရီး ထွက်မယ်အကို…ဟိုရောက်ရင် အဲဒီဒေသက မြန်မာ့အနုသုခုမလက်ရာကောင်းတွေအကြောင်းကို လိုက်လေ့လာပြီး အကိုက ကျွန်တော် ထုတ်မယ့်မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဆောင်းပါးတွေရေးပေးပါ” ဟု ပြောသည်။ ဆယ်ရက်ကျော်ကြာမည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်သား ရန်ကုန်မှ ရထားနှင့်ထွက်လာခဲ့ကြသည်။ ကြားဘူတာရုံ တရုံအရောက်တွင် မြန်မာ့မီးရထားကြီးကရုတ်တရက် စက်ခေါင်းပျက်လေသည်။ အဆိုပါဘူတာရုံကလေးတွင် အချိန်တော်တော်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ည မှောင်ရီပျိုးပြရောက်တော့ ရထားအောက်သို့ခရီးသည် တချို့ဆင်းကြကာ အညောင်းအညာပြေ လမ်းလျှောက်ကြသည်။ ကွင်းစပ်စပ် တနေရာတွင် ခရီးသည်အမျိုးသမီးကလေးတယောက်က...
ဆောင်းလူ – ဖျားနာနေသော ညများ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၄ ဖျားနာနေသည်မှာ ကြာပြီ ..။ တိတိကျပင်ဆိုရပါမူ … ဖျားနာနေသောကာလသည် နှစ် ၃၀ အစွန်းထွက်တိုင် ရှိလှပြီ။ လျှောက်လျက်မိသားဖြစ်နေသည် ခရီးရှည်တလျှောက် ကျကျန်ရစ်ခဲ့နိုင်သည့် ဖျားနာခြင်းတို့သည် တသမတ်တည်းမရှိ။ အရိုးဆွေးအောင် လှနိုင်လွန်းလှသောညတွင် ခုတလော၏ ဖျားနာမှုတို့သည် ပို၍ ပို၍ သည်းလာသည်ဟု ထင်မိသည်။ မလှမ်းမကမ်း၏ ညဉ့်ပျော်တို့ဆီမှ … ကလူ၏သို့ မြူ၏သို့နှင့် .. နီယွန်းမီးရောင် ဖျာထိုးဆင်းနေသည့် ဖလက်ဖောင်းသည် ညအား ဖျားနာချင်အောင် ဆွဲ ဆောင် လွန်းလှသည်။ ထို့အတူ … ဘယ်ညာတဖက်တချက် အနားပိတ် အကျဉ်းချထားသည့် လူကူးမျဉ်းကြားတို့သည် … လူတိုင်း၏ ဒဏ်ကို...